आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो त ? – पुरा पढ्नुहोस्……
असोज, काठमाडौं । सुनको मूल्य आज प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले बढेको छ ।
सुनको मूल्य आज तोलाको ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो तोलामा एक हजार २ सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । समग्रमा यो हप्ता सुनको भाउ तोलामा ३ हजार एक सय रुपैयाँ घटेको छ ।
Prev१७ बर्षमा ड्राई,भर बनेका भाईको गीत रेकर्ड हुदै । रचना रिमालसँग गीत गाउने पक्का, शिशिर भण्डारीको सहयोग (भिडियो सहित)
Nextको,रोना जितेकी नर्सले लेखिन स्वास्थमन्त्रीलाई यस्तो खुला पत्र… के छ त पत्रमा ?
इराकबाट आयो रुदै एक महिलाको रबी लामिछानेलाई रूदै यस्तो म्यासेज – भिडियो हेरी सक्दो शेयर गरौं।
हिरासत मुक्त भएपछिको पहिलो बिशेष सिधाकुरा, रवी यसरी कडारूपमा प्रस्तुत हुदै पीडितको पक्षमा (भिडियो सहित)
फेरी सन्दीपले ल्याए सारा नेपालीलाई यस्तो खुसीको सन्देश